थाहा खबर: 'देउवा पुस्तासँग नेतृत्व खाेस्‍नुपर्ने अवस्था नआओस्'
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसभित्र नेतृत्वको खरो आलोचना गर्नसक्ने नेता हुन् गुरुराज घिमिरे। कांग्रेसका भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी सभापति देउवाले विधान पालना नगरेको भनेर स्पष्ट भन्ने नेता मध्येमा पर्छन्। उनले अहिले पार्टी नेतृत्व गरिरहेको पुस्ता अब विश्राम लिने अवस्थामा पुगेको र पार्टीको बागडोर नयाँ पुस्ताले सम्हाल्नु पर्छ भन्दै आएका छन्।
के साँच्चै देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पुस्ताले १४ औँ महाधिवेशनमा विश्राम लिन्छ त ? के नयाँ पुस्ताले अबको कांग्रेसको नेतृत्व गर्ला ? अनि सत्तारुढ दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली बीचको भेट जायज थियो ? यी र यस्तै विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेसँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :-
कांग्रेसलाई सधैँ झगडा मात्रै गरिरहने पार्टी भन्छन् नि ? खास झगडा, विवाद किन भइरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको एउटा पहिचान नै के हो भने विचारको विविधता। नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपबाट ऐक्यबद्धता र समय समयका विभिन्न घटनाक्रमहरूको विभिन्न मुद्दाहरूमा आआफ्नो धारणा, वादविवाद, संवाद र त्यसपछि फेरी ऐक्यबद्धता हाम्रो पहिचान नै हो। हाम्रोमा नीतिगत मत भिन्नता छैन, हाम्रोमा सैद्धान्तिक मत भिन्नता छैन। हाम्रोमा दार्शनिक रुपमा कुनै मत भिन्नता छैन। हामी एकतावद्ध छौँ। तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा मतभेद हुन्छ। त्यो मतभेदलाई कतिपय मान्छेहरुले पार्टी भित्रको असाध्यै ठूलो झगडाको रुपमा, द्वन्द्वको रुपमा लिन्छन्। यो अरु राजनीतिक दलहरु, गैरराजनीतिक दलहरु जस्तो नियोजित हुँदैन। कांग्रेसमा हुने फरक तर्क र बहसलाई कतिले झगडाको संघ्या दिन्छन् वास्तवमा यो झगडा नै होइन।
सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान मिचे भनेर तपाईँहरुले भन्ने, देउवाले विधानसम्मत नै विभाग गठन गरेको भन्ने। अनि सभापति त आफैँ शक्तिशाली हुन्छ क्यारे अनि देउवालाई विधान मिच्ने अवस्था किन आयो ?
यी घटनाहरु जसरी बाहिर आए यस पनि कुनै नीतिगत सैद्धान्तिक मत भिन्नता छैनन्। यसमा विधानको पालनाको प्रश्न मात्रै छ। विधानको पालना गर्ने सन्दर्भमा विधानले नै निर्देशित गरेको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया सम्मत अघि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले उठाएको मुख्य कुरा नै यही हो। हाम्रो साविकको विधानमा २ महिनाभित्र पार्टीका पदाधिकारी, विभाग, केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो तदनुरुप पार्टी सभापतिले पदाधिकारी, विभाग, केन्द्रीय कार्यसमिति केही पनि विस्तार गर्नु भएन। पछि महासमितिको बैठकबाट २ महिने समयसीमालाई छ महिना बदल्यौँ। ६ महिनाभित्र पनि उहाँले गर्नु भएन। विधानले निर्देशित गरेको, विधानले देखाएको बाटो भन्दा बाहिर जाने अधिकार हामी कसैलाई पनि हुँदैन।
मतभेद नै यसैमा हो। सभापति ज्यु महाधिवेशन गर्ने वर्ष अहिले विभाग गठन गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो भनाई के भने विधानले व्यवस्था गरेको समयसीमा भित्र हामीले काम गर्नैपर्छ जुन बाध्यकारी छ। विगतमा भएको थिएन, अघिल्लो वर्ष पनि समयमै भएको थिएन भनेर विधान नाघ्न पाइँदैन, मिच्न पाइँदैन। विगतका नेतृत्वले विधान पालना गरेनन् मैले किन गर्न पर्याे भनेर पनि पाइँदैन। लोकतन्त्र भनेको व्यवहारले सिद्ध गर्ने प्रणाली हो मुखले बोलेर मात्र हुँदैन। मुलुकको संविधान कार्यन्वयन गर्नु जसरी मुलुकको कार्यकारी र मातहतका निकायको कर्तव्य हुन्छ त्यसरी नै पार्टीको विधान पालना गरेर कार्यान्वन गर्नु त्यसको नेतृत्व र त्यस सम्बद्ध निकायको पनि कर्तव्य हुन्छ। त्यो कर्तव्यबाट पार्टी सभापति टाढा भाग्न खोज्दा समस्या आएको हो। पार्टी सभापति पालनामा कमजोरी देखाउँदै हुनुहुन्छ।
हामी यो कमजोरी देखाउन पाउनुहुन्न भन्दैछौँ। पार्टीको एउटा नेताको मनोगत चाहनामा पार्टी दौडाउन खोजेर हुँदैन। जस्तो अहिले हामीले देखिराख्या छौँ नि सरकार केपी ओली जीको चाहनामा चलिरहेको छ। तर, प्रजातान्त्रिक पार्टीले विधानले तय गरेको भन्दा बाहिर जान मिल्दै मिल्दैन। सभापति बाहिर जान खोज्ने, हामीले बाहिर जान हुँदैन भन्यौँ मूल विवाद यही हो।​
गत कात्तिक १७ गतेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सभापति देउवाले कांग्रेस बिग्रिएको जिम्मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लिनुपर्छ भन्नु भयो। खासमा पार्टी बिगारेको कसले हो ?
गज्जब कुरा उठान गर्नुभयो। अहिले देश चलाउने जिम्मा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली जीले पाउनु भएको छ। नेकपा चलाउने जिम्मा केपी ओली जी र प्रचण्ड जीको हातमा छ। अब केपी र प्रचण्ड जीले चाहिँ दोष जति अरु नेताको भन्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री जीले राज्य चलाउने कुरामा चाहिँ समस्या भयो यसको दोष चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको, बाबुराम भट्टराईको या प्रतिपक्षी दलका नेताको भन्न मिल्छ ? मिल्दैन नि।
यो त एउटा प्रक्रियाले विधिले पाएको जिम्मा पाएको कुरा हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस बिग्रियो भने, कांग्रेस ओरालो लाग्यो भने, कांग्रेसको शक्ति घट्यो भने, नेपाली कांग्रेसका प्रति जनताको समर्थन, जनमत घट्यो भने जिम्मा कसले लिने ? पार्टी चलाउने जिम्मा जस्ले लिएको छ उसले जिम्मा लिनुको सट्टा निर्वाचनमा हारेको, आफ्नो प्रतिस्पर्धी, बहुमत पनि आफ्नै छ,पदाधिकारीमा पनि बहुमत आफ्नै, केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत आफ्नै, संसदीय दलमा बहुमत आफ्नै, आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा आफ्नो प्रतिष्पर्धा नेतालाई पार्टी बिगारेको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नु हास्यास्पद र गैरजिम्मेवारी पनको पराकाष्ठा हो।
फागुनमा १४ औँ महाधिवेशन हुने सम्भावना त टरेको भनेर काँग्रेसभित्रै भन्दै आएको सुनिन्छ खासमा महाधिवेशनको तयारी कसरी हुँदैछ ?
केही दिन अघि मात्रै बसेको बैठकले पार्टीको सदस्यता नवीकरण, क्रियाशील सदस्यता वितरण शतप्रतिशत थप्ने भन्ने जुन मुख्य काम बाँकी नै छ। हामीले हाम्रो क्रियाशील सदस्यता संख्या ४ लाख ७० हजारबाट बढाएर दोब्बर बनाउने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसमा लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपाबाट आएका र अरु व्यक्तिगत रुपमा आएका साथीहरुको पनि क्रियाशील सदस्य थपेर झण्डै झण्डै १० लाख क्रियाशील पुर्याउनुपर्नेछ। अझै केही वितरण गर्नै बाँकी छ। वितरणको काम नभएका, नवीकरण हुन बाँकी भएका ठाउँहरु छन् त्यहाँ यी सबै काम सकेर मंसिर मसान्तभित्र अभिलेख केन्द्रमा पठाउन भनेको छ। त्यो काम जारी छ।
यदि मंसिर मसान्तभित्र अभिलेख आएन भने त्यो जिल्लाका क्रियाशील सदस्यहरुले पार्टीको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। क्रियाशील सदस्यको विवरण केन्द्रमा आउन ढिला भयो। भदौसम्म सक्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित तालिकाबाट धेरै पर आइसक्यौँ। कोरोना महामारी, चाड वाड, आन्तरिक खिचातानी यी सबैको कारण यो काम पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार हुन सकेन। यही काम मंसिर मसान्तभित्र गरिसक्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। मंसिर मसान्तसम्ममा प्रारम्भिक मतदाता तयार हुन्छन् त्यसपछि हाम्रो महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । फागुनको सम्भावना टरेको भनेर भन्न मिल्दैन।
कांग्रेसको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ तपाईँको पुस्ताले अबको कांग्रेस हाँक्ने अवसर आउला ?
महाधिवेशनले नै नेतृत्व चयन गर्ने हो। अहिले हाम्रो पार्टीका आम साथीहरुको माग के छ भने देउवा पुस्तासँग किन खोस्ने, पुरानो पुस्ताले नै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरोस्, नयाँ पुस्ताले पार्टीको बागडोर सम्हालोस् भन्ने छ। हामी पनि यहि चाहन्छौँ। अहिलेको चुनौतीलाई हेर्दा खेरी हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक पार्टी नेकपा जो हाम्रो लागि गत निर्वाचनमा असाध्यै भारी भयो। अब फेरी २०७९ मा हुने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचनको सामना गर्नुछ। त्यसका लागि पार्टीको संगठन व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ ।
आन्तरिक भद्रगोललाई व्यवस्थित बनाउनुछ र पार्टी सुदृढ र व्यवस्थित भएर अघि बढेको छ भन्ने सन्देश पनि व्यवहारिक रुपमै दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि महाधिवेशन महत्वपूर्ण थलो हो। यो महाधिवेशनले आगामी कार्यकालमा कसरी अघि बढ्ने भनेर नीति निर्माण गर्ने कार्य त छँदै छ अर्काे मुख्य कुरा कार्यान्वयन गर्ने मूल संयन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति हो, तह गत कार्यसमिति हो। यसैका लागि यो महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्ने बहस मूल बहस छ। अहिलेको नेतृत्वले लामो समय नेतृत्व गरेको छ। पञ्चायत हुँदा अप्ठ्यारो भोग्दै ३० वर्ष नेतृत्व गर्याे, त्यस यताको ३० वर्ष पनि उहाँहरुले काम गरिसक्नु भयो। अप्ठ्यारो बेलामा उहाँहरुले काम गर्नु भयो त्यो उहाँहरुको विगत स्वार्णाक्षरले अंकित छ। २०४६ साल यताको हेर्दा उताडचडाब छ। राम्रो पनि भएको छ। कतिपय राम्रो गर्न सक्नु भएको छैन। समग्रमा भन्दा उहाँहरुले सक्रिय नेतृत्वबाट विदा लिने बेला भएको छ।
अन्तमा नेकपा चरम विवादमा छ। यही बेलामा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच घण्टौँ भेटवार्ता पनि भयो । सत्ता साझेदारीको कुरा, संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा बार्गेनिङ गर्ने कुरा भयो भन्छन् नि ?
प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भेट्नु नौलो कुरा होइन चलि आएकै कुरा हो। अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था, सरकार गैरजिम्मेवार भएको कारण भनेको केहो भने प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेताहरुसँग छलफल नगरेरै हो। मुख्य विपक्षी दलको सल्लाह र सुझाब नमानेर बिग्रिएको हो। निर्वाचन जितेपछि बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गरेर विपक्षी दललाई भित्तामा पुर्याउने या किनारामा धकेल्ने उहाँहरुले जुन प्रयत्न गर्नु भयो त्यसबाट कुरा बिग्रिएको हो। अहिले भेटेको कुरालाई मैले त्यति धेरै व्याख्या गर्न चाहन्नँ। उहाँले भेट्नु भयो, भेटपछि धेरै कुरा बाहिर आएका छन्। संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका कुरा आए, सत्ता साझेदारीका कुरा आए। यसको अन्तर्यमा के छ अनुमान गर्ने कुरा हो। भेट्ने कुरालाई नै गलत हो भन्न त भएन।
अहिले नभेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हो। किन भने नेकपाभित्र अहिले सत्ता संघर्ष चलिराख्या छ आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ। आज पार्टी फुट्लाकी भोली फुट्ला भनेर अनुमान गरेको अवस्था छ। यस्तो घटनाक्रम भएको बेला विपक्षी दलको नेतासँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए केपी ओली बूढानीलकण्ठ गएको भइहाल्थ्यो। हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला अमिकशेरचनाको घर पुग्नु भएन कि, नारायणमान बिजुक्छेको घर पुग्नु भएन कि, कहाँ पुग्नु भएन प्रधानमन्त्री हुँदा? यदि प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको सत्तारुढ दलको अध्यक्षलाई विपक्षी दलका प्रमुखसँग परामर्श लिनुपरेको अवस्था आएको भए कहिले काहिँ विपक्षी दलको मै गए हुँदैन?
प्रधानमन्त्रीले सहयोग माग्नु भएको छ। विश्व विद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको, संवैधानिक नियुक्तिको कुरा मात्रै होइन सत्ता साझेदारी गरौँ भनेको भनेर समाचारहरु बाहिर आए त्यो कुरा आफैँ गएर परामर्श किन नगरेको किन बोलाएर गरेको ? अनि महत्वपूर्ण कुरा विपक्षी दलको नेताले कति खेर कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्ने कुराको हेक्का चाहिँ राख्नुपर्छ।